Lalao Android maimaim-poana farany - famoahana, hevitra, fitaka | Androidsis (Pejy 8)
Pokémon GO dia nahatratra $ 800 tapitrisa tamin'ny vola niditra tao anatin'ny fotoana firaketana
Pokemon GO dia nahatratra $ 800 tapitrisa tamin'ny vola niditra tamin'ny fotoana firaketana ary namela ireo mpifaninana mivantana aminy toa an'i Clash Royale.
Samurai Saga dia arcade platformer izay mandeha amin'ny hafainganam-pandeha
Samurai Saga dia lalao video haingam-pandeha izay ny hery mpiady, mitsambikina ary samurai dia mamorona fitambarana tsara.
Avereno ao anaty Cluckles ireo zana-borona mahafatifaty, mpiorina manana olana sarotra
Cluckles dia platformer mahafinaritra sy haingam-pandeha miaraka amin'ny ambaratonga vita tanana izay tokony hanampianao akoho am-paherezana.
Arotsaho an-tànana mahery io backhand ary mitarika ny mpanohitra anao hihinana loto ao amin'ny Ban Bang Tennis
Raha mitady kilalao tennis marobe eo an-toerana ianao, Bang Bang Tennis dia iray amin'ireo filokana tsara indrindra anananao izao amin'ny Android.
Ny lalao Ketchapp dia mihaika antsika indray amin'ny Jumpy, sehatra tsy mataho-tody
Ny Ketchapp Games dia miverina amin'ny lozisialy miaraka amina sehatra tsy mataho-tody izay afaka mamorona ambaratonga amin'ny fomba kisendrasendra tanteraka.
Hack ny rafitra ao amin'ny The Hacker 2.0 a Deux Ex GO
Ny Hacker 2.0 dia mitovy amin'ny andiany GO avy amin'ny Square Enix hametraka anao eo alohan'ny zavatra tena hacker tena mila manapotika ny rafitra.
Manipaha tariby sy fitaratra isan-karazany amin'ny laser mba hamahana ny piozila mankany an-danitra
Into the Sky dia piozila iray izay tsy maintsy manodinkodina fitaratra sy taratra jiro laser maromaro mba hahafahan'izy ireo mitambatra amin'ny lokon'ny zavatra kendrena.
Lalao Retro mampihetsi-po 2 avy amin'ny developer espaniola
Androany aho mitondra lalao Retro mampihetsi-po 2 ho tianao, izy ireo dia noforonin'ny Zombie Brothers developer espaniola roa izay miasa mafy.
Castle Creeps dia fiarovana ambony tilikambo avo lenta
Castle Creeps dia fiarovana tilikambo vaovao izay mitondra ny zava-drehetra nahatonga ny karazana malaza: mahery fo, tilikambo ary kalitao teknika lehibe.
Tsofy ao Blast Blitz, 'Bomberman' sarotra amin'ny devoly
Raha mitady fampifangaroana hafahafa eo amin'ny lalao samihafa ianao, toa ny Crossy Roads sy Bomberman, Blast Blitz no vahaolana amin'izany.
Dash Quest, RPG mpihazakazaka tsy misy farany izay ahitanao ireo mpampiasa farany sy maro hafa
Dash Quest dia lalao video RPG misy lanjany lehibe tokoa noho ny andian-javatra izay mahatonga azy io ho iray amin'ireo mahaliana indrindra tato anatin'ny volana vitsivitsy.
Mamolavola rover anao manokana hijerena ny volan'ny volana ao amin'ny The Lunar Explorer
Ny Lunar Explorer dia lalao video tena mahira-tsaina izay tsy maintsy hamolavola ny rover anao manokana mba hijerena ny tampon'ny volana.
Ny lalao 6 Man Man Mobile rehetra dia eto amin'ny € 1,99 tsirairay avy
Androany dia azonao atao ny mividy ny lalao enina Mega Man Mobile amin'ny Android amin'ny $ 1,99 rehefa alefan'ny Capcom ao amin'ny Play Store izy ireo.
Ny Little Fox dia mpihazakazaka tsy manam-petra amin'ny kalitaon'ny fahitana miavaka sy ny fahasarotan'ny devoly
Raha tianao ny lalao sarotra ary manana fifanarahana betsaka amin'ny sary, The Little Fox dia lalao video tokony lalaovinao.
Retro City Rampage DX dia manohitra anao amin'ny tontolony misokatra, sary mihetsika Retro ary mandohalika mankany amin'ny taona 80
Avy amin'i Steam no misy ny Retro City Rampage DX mahavariana amin'ny findainao Android hahafahanao mijery ny tontolony misokatra amin'ny endrika tanàna.
Lalao video Android 30 malaza indrindra amin'ny 2016
Ny taona 2016 dia mamela antsika ary miaraka amina lohateny lehibe manana kalitao goavambe izay hampahatsiahy antsika ity taona ity amin'ny fomba miavaka.
Ookujira na ilay trozona hafahafa sy goavambe izay tokony hamonjy ny zanak'olombelona amin'ny vahiny
Ookujira dia lalao video iray tena miavaka noho ny tantara hafahafa izay mitondra antsika any amin'ny efijery an'ny finday avo lenta mba ho sehatra iray.
Azonao atao izao ny misoratra anarana ho voalohany mampidina ny lalao video 6 Mega Man
Mega Man dia hiverina am-pandresena amin'ny fiandohan'ny taona izay efa ho avy. Misoratra anarana ao amin'ny tranonkalany mba ho voalohany mampidina azy ireo
Nihena 40% ny saga Dragon Quest an'ny Square Enix tao amin'ny Google Play Store
Raha tianao RPG ary maro hafa raha avy any Japon, ny Dragon Engan's Dragon Quest saga dia azo amidy ankehitriny.
Afaka misoratra anarana amin'ny Super Mario Run ao amin'ny Google Play Store ianao izao
Manomboka androany dia efa misy ao amin'ny Google Play Store ny Super Mario Run mba hisoratanao anarana ary azonao atao ny misintona azy hatramin'ny fotoana anaovany izany.
Izahay dia milalao ny vaovao farany an'ny Geometry Dash, Geometry Dash World ary Geometry Dash Meltdown
Androany izahay dia mitondra lalao lalao ianao mba hahitanao ny vaovao indrindra amin'ny Geometry Dash, ilay lalao izay nanapotika ny firaketana fampidinana rehetra tao amin'ny Android.
Miorina amin'ny swipe dia manapa-kevitra ny amin'ny ho avinao amin'ny mpanjaka ianao
Reigns dia manolotra anao hahafantatra amin'ny toerana misy ny dikan'ny hoe mpanjaka mila mahay manapa-kevitra amin'ny ho avin'ny fanjakany.
Noodlecake Studios dia mitondra ny filany ho pinball amin'ity Krismasy ity miaraka amin'ny Snowball
Raha mitady lalao pinball manokana ianao ary ny latabatra misy fanitarana sy atiny tsara dia tsara ny Snowball avy any Noodlecake Studios.
Kubic no filohan'i Ketchapp Games ho an'ny Tetris 3D na cubic
Ny Ketchapp Games dia mandefa ity tolo-kevitra antsoina hoe Kubic ity ary mitondra antsika any amin'ny karazana Tetris izay toratelo toradroa.
RollerCoaster Tycoon Classic dia mamerina iray amin'ireo simulator park park tsara indrindra
RollerCoaster Tycoon Classic dia mamerina antsika iray amin'ireo simulator mahazatra izay tsy maintsy anorenanao ny valan-javaboary tsara indrindra.
Nitrome's Dachshund niverina niaraka tamin'i Silly Sausage Doggy Dessert
Nitrome dia mitondra antsika hiverina amin'ilay alika saosisy miaraka amin'i Silly Sausage Doggy Dessert, sehatra manokana kely misy ambaratonga maro.
Angry Birds Blast no filohan'i Rovio vaovao vaovao, saingy mandika mazava ny Candy Crush amin'ny ankamaroan'ny filalaovany amin'ity fahatongavany vaovao ity.
Nintendo dia nanolo-tena hamoaka lalao smartphone 2-3 isan-taona
Nintendo dia toa tena tapa-kevitra ny hametraka habaka lehibe amin'ny finday miaraka amin'ny famoahana anaram-boninahitra roa ka hatramin'ny telo isan-taona.
Nintendo dia manontany amin'ny Gamers hoe ohatrinona no aloany amin'ny Super Mario Run
Nintendo dia te-hahita ny vidiny mety ho an'ny lalao video ary noho izany dia nandefa fanadihadiana nanontany ny vidin'izy ireo ho an'ny Super Mario Run
Final Fantasy sy kilalao Square Enix lehibe hafa dia amidy hatramin'ny 5 Janoary
Raha mitady hividy ny Fantasy Final misy amin'ny Android ianao na ilay tsiambaratelon'ny Mana miafina, dia izao no fotoana mety indrindra amin'izany.
Lalao fiaran-dalamby 4 izay tsy tokony halainao amin'ny lafiny rehetra
Raha ny fiaran-dalamby no fanananao, ireto lalao video 4 manokana ho an'ny Android ireto dia hanampy anao hankafy ity Krismasy ity amin'ny fotoana rehetra manerantany.
Super Mario Run dia mahazo fampidinana 40 tapitrisa ao anatin'ny 4 andro voalohany
Super Mario Run dia mbola ho avy amin'ny Android, fa amin'izao fotoana izao dia mizotra tsara amin'ny iOS, izay nahatratra 40 tapitrisa ny fampidinana
Tonga ihany ny "Ender Update" tao amin'ny Minecraft Pocket Edition
Ny fanavaozana ny "Ender Dragon" dia tonga tao amin'ny Minecraft Pocket Edition ary nametraka ny lalao tamin'ny andiany 1.0 amin'ity Noely ity.
Ireo lalao video 4 tsara indrindra Android izay azonao lalaovina amin'ity Krismasy ity
Lalao video 4 izay tsy tokony halainao hisarika azy ireo amin'ity Krismasy ity. Arcade, sehatra, RPG ary pinball manokana no miandry anao.
Nintendo dia tsy mikasa ny hanampy votoaty fanampiny amin'ny Super Mario Run
Super Mario Run dia mifanohitra amin'ny maodely finday amin'izao fotoana izao amin'ny fahafantarana fa tsy hisy fanavaozana amin'ny atiny vaovao.
Makà Deux Ex GO sy Lara Croft GO maimaim-poana amin'ny Amazon Underground
Avy amin'ny Amazon Underground ianao dia afaka mahazo Deux Ex GO sy Lara Croft Go maimaim-poana amin'ity Krismasy ity.
Capcom hamoaka ny lalao enina tany am-boalohany Mega Man amin'ny volana Janoary
Amin'ny volana Janoary, ny Gamers Android dia hanana daty manokana manokana amin'ny fahatongavan'ny 6 amin'ireo lalao tany am-boalohany an'ny Mega Man lehibe.
Raiso ny fiaran-dalamby haka ny mpandeha aminy amin'ny alàlan'ny fanovana lalana amin'ny Conduct This!
Fitondran-tena Ity lalao arcade misy lohahevitra mahaliana ity izay hisedra anao hifalifaly amin'ny lalao mahafinaritra.
Solitairica dia mandray amin'ny famirapiratana farany ambony indrindra izay irery foana
Ny fifangaroan'ny sokajy no mahatonga an'ity lalao antsoina hoe Solitairica ity ho lehibe ary manome ny fofon'ny lalao mahafinaritra izay tsy mankaleo.
Mime ratsy sy sakafo haingana be amin'ny hadalana antsoina hoe Fast Food Rampage
Famonoana rehetra dia tsy maintsy ataonao amin'ny Fast Food Rampage miaraka amina hamburger, voasarimakirana ary pie paoma torotoro tsara
Tariho ny orinasan-dalambinao ho amin'ny fahombiazana amin'ny Tiny Rails mahafinaritra sy feno
Tariho ny orinasam-by nolovan'ny raibenao tamina fahombiazana tamin'ny Tiny Rails mahafinaritra sy feno. Lalao video mirehareha amin'ny kanto pixel tsara
Ny fiankinan-doha amin'ny lalao video dia antsoina hoe Symmetria mandraka ankehitriny
Ny piozila lehibe antsoina hoe Symmetria dia tonga hanohitra ny atidohanao sy ny fahafantarany ny toerana eo aloha.
Raha raiki-pitia tamin'i Zelda ianao dia hanaitra anao i Oceanhorn amin'ny fiovana voalohany
Raha ny lalao karazana Zelda no zava-dehibe aminao dia hataon'ny Oceanhorn ho tia anao fotsiny ianao hahafahanao milalao maimaimpoana ny toko voalohany.
Ireo lalao dimy alaina indrindra amin'ny Play Store amin'ny 2016
Avelanay ho anao ny lisitr'ireo lalao dimy tena alaina indrindra ao amin'ny Google Play Store amin'ity taona 2016 ity izay mifarana
Lalao 5 Instant Instant Facebook Messenger tsara indrindra
Lalao Instant no lalao Facebook Messenger vaovao azonao lalaovina amin'ny sakaizanao miaraka amin'ny namanao. Ireo dimy ireo no tsara indrindra.
Hill Climb Racing 2 dia nidina efa ho roa andro
Lalao izay mifototra amin'ny multiplayer ary izao dia manana ny mpizara, izay manakana ny filalaovana ireo maody roa lehibe indrindra.
Pokémon GO farany nahazo ny Pokémon vaovao ary fanontana Krismasy manokana Pikachu
Hatramin'ny 29 desambra dia afaka mihaza eny an-dalambe ianao amin'ny fanontana manokana ny Krismasy Pikachu ary mahazo ny Pokémon vaovao avy amin'ny Pokémon GO
Pokémon GO 'Gen 2' Vaovao farany navoaka
Pokémon GO tsy ho ela dia hahazo fanavaozana vaovao miaraka amin'ny taranaka Pokémon faharoa. Ny "Gen 2" dia io fanavaozana io.
Ady an-tantara eo amin'ny mpiady an'arivony sy ny Titans ao amin'ny Dawns of Titans lehibe
Dawns of Titans dia paikady tena izy ary manangana lalao video misy ny fanjakanao miaraka amin'ny titans goavambe.
Busted Brakes dia mahazatra an'ny Ketchapp Games na dia somary lalindalina kokoa aza
Ny Ketchapp Games dia miverina amin'ny ady miaraka amin'i Busted Brakes, lalao video izay misongadina amin'ny haren'ny fahitana azy satria tsy dia mahazatra toy ny maro hafa.
Tariho ny foko handresy ny fahavalonao ao amin'ny The Battle of Polytopia
Ny Battle of Polytopia dia lalao video misy fomba sivilizasiona izay hitondra anao eo alohan'ny foko sy ny mpifaninana aminao handresy azy ireo tsy misy indrafo.
Samorost 3 dia asa kanto amin'ny lalao video
Samorost 3 dia avy amin'ny mpamorona Botanicula sy Machinarium. Lalao izay misongadina amin'ny jeneraly ananany amin'ny toerana miafina rehetra ananany.
Ny fahagagana amin'ny piozila hypnotic an'ny Where Shadows Slumber
Izay i Shadows Slumber dia traikefa iray amin'ny lalao piozila izay hitondran'ny aloka sy jiro anao hatramin'ny faran'ny haavony.
Ecotone Pocket dia manova ny fitsipiky ny sehatra isaky ny ambaratonga
Ecotone Pocket dia sehatra iray tany am-boalohany izay manandrana manova ny fitsipi-dalao amin'ity karazana lalao ity amin'ny ambaratonga tsirairay ananany.
Ny Super Mario Run dia azo lalaovina amin'ny Internet ihany
Nanazava i Miyamoto ny antony ilain'ny Super Mario Run fifandraisana amin'ny Internet hilalao. Amin'izao fotoana izao dia tsy misy afa-tsy amin'ny iOS.
Sony dia niverina tamin'ny làlan'ny filalaovana smartphone miaraka amina lohatenin'ny Playstation 10
Ao amin'ny 2017 i Sony dia hamerina lalao video avy amin'ny Playstation for Android sy iOS. Izy io no ho folo marina hatomboka voalohany any Japon sy Azia.
Rockstar Games Mankalaza ny tsingerintaona faha-XNUMX an'i Bully miaraka amin'ny Android Launch
Lalao Rockstar, toy ny tamin'ny lohateny hafa, dia nandefa an'i Bully, lalao video izay ianao no lehilahy ratsy fanahy ao am-pianarana, ho an'ny Play Store.
Niantic hanambara ny taranaka Pokémon faharoa amin'ny herinandro ambony
Ny 12 Desambra dia toa ny daty natoron'i Niantic hamoaka izay ho taranaka faharoa Pokémon ao amin'ny Pokémon GO lehibe.
Forged to Fight, lohateny Transformers vaovao ho an'ny lohataona 2017
Ho an'ny lohataona 2017, ireo mpankafy Transformers dia afaka mankafy lalao Android vaovao, Transformers: Forged to fight.
Telltale Games dia manambara ny andiana lalao Guardians of the Galaxy vaovao
Toy ny Batman na Game of Thrones, Telltale Games dia hamoaka andiana lalao video Guardians of Galaxy vaovao amin'ny 2017.
Tsy maintsy apetrakao ao anaty vilany ny baolina amin'ny lalao video antsoina hoe Tigerball izay mampiasa fizika zavatra lehibe izay tena izy.
Zombie hazakazaka amin'ny Multiplayer mahafinaritra miaraka amin'ny Deadly Run
Ao amin'ny Deadly Run dia hiatrika mpilalao hafa miakanjo toy ny zombies ianao afaka mamofona sy mahatsapa rehefa manandrana hahatratra ny tanjona eo alohanao.
Hill Climb Racing 2 dia mitondra anao any amin'ny hazakazaka multiplayer tsy misy ifandraisany
Raha mihazakazaka amin'ny lalao multiplayer ianao mba hiadiana amin'ny mpilalao hafa, Hill Climb Racing 2 dia ho anao.
Miezaha mamerina ny maha-olombelona anao amin'ny fampihorohoroana ara-tsaina an'ny DISTRAINT: Horohoro Pixel Pocket
Ity lalao ity dia tokony aseho any an-tsekoly izay ampanofanina ny mpamorona ho avy mba hijery ny fomba fanaovana lalao mampihoron-koditra.
Ho tsapanao ny firohondrohon'ny Formula 1 amin'ny Android anao miaraka amin'ny F1 2016 avy any Codemasters
Efa manana Formula 1 amin'ny Android ianao miaraka amin'ny kinova feno an'ny lalao navoakan'ny Codemasters tamin'ny fahavaratra lasa teo tamin'ny consoles sy PC miaraka amin'ny F1 2016
Ny lalao Android tsara indrindra hanararaotana ny tetezana Desambra
Androany izahay manome anao safidin'ireo lalao Android tsara indrindra sy mahaliana indrindra hahafahanao manararaotra ity tetezana lava desambra ity
Manipulà fotoana amin'ity mpitifitra sary miavaka ity antsoina hoe Time Locker
Hangatsiaka ny fotoana hanafoanana ny karazana fahavalo rehetra eo amin'ny efijery amin'ity lalao lehibe sy hafa antsoina hoe Time Locker ity, azo alaina ao amin'ny Play Store.
Ho an'ny Lemmings dia mandeha amin'ny fotoan'ny mpiady lava-bato amin'ny Caveman HD izahay
Caveman HD dia klonan'ny Lemmings fotsiny saingy napetraka tao amin'ny tontolo talohan'ny tantara. Lehilahy lava-bato ny protas-ny
Mamily fiara voaravaka baomba amin'ny Time Bomb Race
Time Bomb Race dia lalao mampiala voly izay tsy miaraka amin'ny fikasana hafa fa manana fotoana mety mandritra ny fotoana fohy miaraka amin'izany fiara izany ianao sy ilay baomba miaraka amin'ny mpampita azy.
Super Cat Bros amin'ny endriny Super Mario indrindra fa amin'ny saka
Raha mitady lalao ianao hampijanona ny fanirianao hankafy ny lalao arcade finday voalohany an'i Nintendo miaraka amin'ny Super Mario Run, andramo ny Super Cat Bros
Miatrika anao ireo Bowmasters mpidoroka ra maro ny fifanenjehana marobe mpandatsa-dra
Raha mitady kilalao an-tsitrapo amin'ity Krismasy ho avy ity ianao, dia Bowmasters no tonga lafatra ho an'ny duels eo anelanelan'ny namana sy ny fianakaviana.
Nitrome miverina miaraka amin'ny Hop Swap, sehatra iray misy fikitika hafa
Nitrome dia fanadihadiana iray izay mampiavaka ny Retro sy ny zavakanto pixelated ao amin'ireo lalao video navoakany ao amin'ny Google Play Store.
Limbo tsara amidy ao amin'ny Google Play Store amin'ny € 0,50
Limbo dia iray amin'ireo lalao video tsara indrindra izay ao amin'ny Play Store ankehitriny. Amidy amina zoma Mainty amin'ny € 0,50.
Microsoft dia mitondra Windows Solitaire ao amin'ny Android anao anio
Microsoft Solitaire Collection dia azo alaina ho an'ny Android izao rehefa manomboka anio. Solitaire Windows iray ihany fa misy dokam-barotra.
Google dia nanambara ny fifaninanana lalao Google Play Indie any Eropa
Ny Google Play Indie Games Contest dia nambaran'ny G lehibe ary ny lalao mandroso ankehitriny dia azo atolotra hiditra amin'ny fifaninanana.
Torchlight Mobile dia mampiseho ny heriny amin'ny horonan-tsarimihetsika kilasy kilalao Kitsune vaovao
Torchlight Mobile dia azo inoana fa havoaka alohan'ny faran'ny taona ary hahitana tranomaizina, PvP, fivarotana ingame, ary maro hafa hanantonana anao.
Tonga tao amin'ny Pokemon Go ihany i Ditto tamin'ny farany, ampianarinay anao ny tetika hihaza an'i Ditto
Anio dia asehonay anao ny tetika hihaza Ditto ao amin'ny Pokemon Go, ary io dia tonga tamin'ny iray amin'ireo Pokemons tsy hita be indrindra.
Hitsambikina avy eo amin'ny lampihazo mankany amin'ny lampihazo miaraka amin'ny Ketchapp vaovao: Flip
Flip no vaovao indrindra amin'ny Ketchapp Games ary mampiasa ny fototra hanolorana mekanika lalao mampiankin-doha amin'ny sary mihetsika be.
Aza avela hanapotika ny toetranao amin'ny Danger Dodgers ireo meteorita milatsaka
Danger Dodgers dia lalao video iray izay somary miavaka amin'ny filalaovany, ny sarimiaina ary ny 3D noforoniny tsara. Teraka izy hankafizany.
Cube Knight no cubic an'ny Crossy Road sy Minecraft miaraka amina hetsika sy sabatra maro
Ny lafiny cubic an'ny sary Crossy Road dia hita ao amin'ny Cube Knight: Battle of Camelot, lalao video tena tsara amin'ny lafiny teknika.
Lalao video 4 karazana Temple Run tena tsara navoaka tamin'ity taona 2016 ity
Raha toa ianao ka miditra amin'ny mpihazakazaka tsy misy farany toa ny Temple Run, ireo lalao video efatra ireo dia azo antoka fa hahagaga anao amin'ny sary sy ny lafiny teknika
Tsy manana Thanksgiving izahay fa manana fanavaozana Fallout Shelter vaovao
Fallout Shelter dia havaozina ho an'ny Thanksgiving ary miaraka amina vaovao vaovao tena mahaliana: ny fahaizana mijery ireo lava-bato fialofana
Bethesda sy Zen Studios dia miara-miasa amin'ny latabatra Pinball telo avy amin'ny DOOM, Fallout ary Skyrim
Amin'ny 8 desambra, latabatra vaovao telo no hatomboka amin'ny fifanarahana teraka teo anelanelan'ny Bethesda sy Zen Studios ho an'ny lalao 3: DOOM, Fallout ary Skyrim
Pokémon GO dia mahazo fanavaozana goavana amin'ny volana Desambra miaraka amin'ny varotra, ady PvP, ary Pokémon zazakely
Pokémon GO dia ao ambadiky ny seho fanavaozana goavana ho avy amin'ny volana desambra izay misy Pokémon 100, PvP, varotra ary Pokémon zazakely.
Amin'ny 15 Desambra, Navoaka tao amin'ny iOS ny Super Mario Run, rahoviana izy io no ho amin'ny Android?
Super Mario Run dia ho tonga amin'ny IOS ihany amin'ny 15 Desambra ary tsy fantatra hoe rahoviana ny daty famoahana ny Android.
Peter Molyneux dia maniry ny hanao mpisava lalana amin'ny dia lavitra amin'ny The Trail
Ny Làlana dia vaovao avy amin'i Peter Molyneux, iray amin'ireo manam-pahaizana amin'ny lalao video izay nandefa an-tsarintany an'io sokajy lalao andriamanitrao io.
Space sy ny Wild West dia nitambatra tamina mpitifitra mahafinaritra tany Cowboys vs UFOs
Lalao ankafizinao toy ny dwarves amin'ny alàlan'ny fanesorana ireo vahiny mahatsiravina izay te-hisambotra anao ihany.
Mandrosoa Burrito Bison hamongorana ny fanafihana tsaramaso ao Burrito Bison: Launcha Libre
Tonga eo amin'ny efijery finday avo lenta amin'ity lalao video antsoina hoe Burrito Bison: Launcha libra ity ny tolona. Fahafinaretana sy maro loko ho an'ny tolakandro mangatsiaka
Rehefa misy lalao video maka ny fanahinao ka aza mijanona milalao: High Risers
High Rises dia lalao video iray izay mirehareha kely amin'ny genius, mikasika ny originality ary fiankinan-doha lehibe handoavana ny zava-drehetra.
Miverina ny kilalao shooter mahazatra: Galaga Wars
Galaga Wars dia fiverenan'ny mpitifitra habakabaka mahazatra izay hameno ny efijery findainao amin'ny karazana fipoahana rehetra
Ny be indrindra ao amin'ny Juicy Jerry Barrel Blast dia ny jelly izay tsy maintsy ampitanao amin'ny barika mankany amin'ny barika mba hahazoana ny isa betsaka indrindra azo atao.
Miitomo dia nahazo fanavaozana lehibe niaraka tamin'ny hafatra manokana sy efitrano natokana ho an'ny tena
Miitomo dia mandray izay ho fanavaozana lehibe indrindra hatramin'ny namoahana azy tamin'ny iOS sy Android tamin'ity taona 2016 ity.
Avy amin'ny kaody efa misy ao amin'ny APK an'ny fampiharana dia fantatra fa Pokémon GO dia afaka mahazo Pokémon vaovao hatramin'ny 100
Google dia nahazo ny LeapDroid, emulator Android ho an'ny lalao
LeapDroid dia mandalo eo an-tanan'ilay G lehibe ary ny mpanorina azy roa dia hanomboka hiasa amin'ny tetikasa mifandraika amin'ny fakana tahaka.
Namakivaky ny dongom-bato, lohasaha ary mivezivezy amin'ny fotaka ao amin'ny Asphalt Xtreme
Gameloft dia nanangana lalao mahatalanjona amin'ny lafiny sary izay hametraka anao tanteraka amin'ny tontolo iainana matotra amin'ny karazana fiara rehetra
Mamorona ekipa maherifo tsara indrindra sy supervillains tsara indrindra ao amin'ny DC Legends
Ny mahery fo rehetra sy ny olon-dratsy ao amin'ny DC Comics dia miandry anao ao amin'ny DC Legends, lalao ady mifandimby miaraka amin'ny RPG sy fahatanterahana ara-teknika lehibe.
Araho ny DiCaprio ary tonga amboadia ao amin'ny Silicon Valley: Miliardera
Silicon Valley: Billionaire dia lalao video simulator izay manolotra anao ho lasa amboadia ao amin'ny Silicon Valley. Mandresy ny tontolon'ny orinasa.
Amboary ny tobinao hiarovan-tena amin'ny fahavalo zombie sy ny olombelona ao amin'ny Zombie Anarchy
Zombie Anarchy dia manolotra anao hanangana ny fotony hiarovanao tena amin'ny zombies sy ny olona ao amin'ny holocaust izay ahitanao ny tenanao.
Ampiasao ny karavasy mba hanafoanana ny fahavalonao ary hamoronana potion ao Undergrave
Dungeons feno biby goavam-be sy fahavalo no miandry anao ao Undergrave, lalao video izay hanan-danja ny karavasy amin'ny hazo fijaliana.
Parallyzed dia sehatra tsy azo antoka izay mila anampianao ireo rahavavy kambana roa
Raha mitady sehatra voalohany ianao izay misy haavo teknika sy fahitana avo, Parallyzed dia iray amin'ireo tolotra tsara indrindra amin'izao fotoana izao.
Pokémon GO novaina tamin'ny Pidgeys vitsy kokoa
Raha reraka ianao satria nahita Pidgeys foana, ao amin'ny fanavaozana ny Pokémon GO vaovao dia tsy hahita olona betsaka toy ny teo aloha intsony ianao.
Superheroes dia mandresy ny Android anao amin'ny DC Legends misy izao
Raha mitady lalao 3D izay mahery setra sy mahery setra mahery fo ianao no mahery fo, aza hadino ny fotoana nifanarahana tamin'i DC Legends.
Hay Day dia nohavaozina miaraka amin'ireo mpiasa an-tsokosoko Rosa sy Ernesto izay hanampy anao amin'ny toeram-pambolanao
Hay Day dia nohavaozina tamin'ny zava-baovao: Rosa sy Ernesto. Mpiasa roa andro izy ireo izay hanampy anao amin'ny asa lehibe indrindra amin'ny toeram-piompianao.
Ny foronina siansa sy ny tandrefana dia mifangaro ao amin'ny Space Marshals 2 lehibe
Raha mitady lalao karazana console amin'ny Android ianao, Space Marshals 2 no tsara indrindra azonao izao noho ny kalitaon'ny teknika lehibe.
Ampidiro ny psyche an'ny Dark Knight ao amin'ny Batman the Telltale Series
Batman The Telltale Series no lalao video vaovao avy amin'ny TellTale Games izay hahafahanao miditra tanteraka amin'ny sain'i Bruce Wayne sy Batman.
Shootout ao amin'ny Mushroom Land dia sehatra adala hahafinaritra miaraka aminy
Raha mitady sehatra tsara kalitao sy fialamboly tsara ianao, miaraka amin'ny Shootout in Mushroom Land dia nahatratra ny toerana nahafinaritra anao ianao.
Ampahatsiahivo ireo biby goavam-be rehetra tonga ho anao amin'ny Fandrika Just sy mahafinaritra
Just Trap dia lalao video izay tsy maintsy ahodinkodinanao eo amin'ny efijery ny rantsan-tànanao hanampiana ilay zazavavy kely hisambotra ireo biby goavambe rehetra ireo.
Ireo takalon'aina mpamonjy voina natao tany amin'ny toby ady tao Dustoff Heli Rescue 2
Mitsitsia POWs, manangana tilikambo fanaraha-maso radio ary miaro ny convoy amin'ny fialamboly mahafinaritra Dustoff Heli Rescue 2
Hitsambikina avy hatrany ao amin'ny Break Liner hipnotic avy amin'ny Ketchapp Games
Break Liner dia lalao iray izay hametahana anao amin'ny lalao voalohany ataonao mba hahazoana ny isa avo indrindra azonao atao.
PinOut dia lalao arcade mahavariana izay manome ny karazana Pinball hikomy
Raha hamorona Pinball mahatalanjona sy manavao tanteraka isika, azo antoka fa PinOut no hevitra tsara indrindra mety hananantsika.
Knights Duel, mamakafaka ny lalao jousting tsara indrindra ho an'ny Android izahay
mandinika amin'ny horonan-tsary Duel of Knights lalao maimaim-poana misy ao amin'ny magazay fampiharana izahay izay ho gaga amin'ny filalaovana azy
Afaka miaraka amin'ny Dark Knight ao amin'ny Batman the TellTale Series ianao izao
Batman the TellTale Series dia azo alaina ao amin'ny Google Play Store maimaim-poana hitondra anao any amin'ny Gotham City
Ny lalao mahatsiravina tsara indrindra amin'ity Halloween 2016 ity
Lalao horohoro manokana 6 izay hitondra anao amin'ny alàlan'ny traikefa nahafinaritra sy atmosfera mampatahotra indrindra izay hampalahelo ny fanahinao amin'ny alin'ny Halloween
Pokémon GO dia mamelatra ireo biby goavam-be mampatahotra indrindra amin'ny Halloween
Pokémon GO dia hametraka andiana biby goavambe ho an'ny alin'ny Halloween izay manomboka amin'ny 26 Oktobra ary hifarana amin'ny 1 Novambra.
Pokémon Go dia navaozina ary ireto ny vaovao
Pokémon Go dia nahatratra ny kinova 0.43.3 nihazakazaka bibikely kely hita teo aloha ary mampiditra vaovao mahaliana sasany
Ahoana ny fomba hanampiana Add ons ao amin'ny Minecraft Pocket Edition
Ao amin'ny Minecraft Pocket Edition dia efa manana ny add-on isika hanampiana fanovana mahery vaika amin'ny lalao na tontolo iainana miaraka amin'ny namana
Hack 'n' Slash amin'ny fotony madio ao amin'ny Smashing the Battle
Smashing the Battle dia hack 'n' slash izay mikendry ny hitondra ny hetsika tsara indrindra sy ny 3D amin'ny efijery finday Android-nao.
Lalao arcade mahafinaritra sy tsotra ary pixelated miaraka amin'ny Tap 'n' Slash
Tap 'n' Slash dia lalao arcade izay mandroboka anao amin'ny fikarohana any an-tranomaizina haingana mba hahafahanao mitombo sy afaka mamoha mahery fo bebe kokoa
Ady amin'ny lalao multiplayer amin'ny fotoana marobe no miandry anao ao amin'ny Slash Arena: Online
Slash Arena: Online dia lalao video beta ahafahanao miatrika mpilalao hafa amin'ny lalao famonoana tena izy
RETSNOM dia iray amin'ireo sehatra sy ankamantatra voalohany indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy
RETSNOM dia rivotra madio ho an'ny karazana potipotika, Puzzles ary hetsika, satria manambatra ireo sokajy rehetra ireo.
Mpihazakazaka vaovao hafa tsy misy fiafarana amin'ny fitsambikinana tsy misy fitsaharana miaraka amin'ny Reflection
Raha mitady fialamboly mahafinaritra ianao, ny Reflection dia ho afaka hameno ireo fotoana mankaleo sy mankaleo amin'ny andro tsy misy fandokafana be.
Tsara lavitra noho ny tsy misy, efa manana Lara Croft: Guardian of Light eo amin'ny Play Store isika
Lara Croft: Guardian of Light dia misy amin'ny olon-drehetra aorian'ny efa-taona niandrasana azy hamoy ilay exclusivité Sony.
Ireo lalao 3 ireo dia mampiseho ny ambaratonga ananantsika amin'izao fotoana izao amin'ny Android. Ny Legend of Skyfish, The Big Butcher ary Don't Starve dia telo avokoa.
Minecraft Story Mode Episode 1 dia maimaim-poana izao ao amin'ny Play Store
Raha mitady Adventure ianao eo amin'ny tontolon'ny Minecraft dia manana ny fizarana voalohany amin'ny Minecraft: Story Mode ianao anio maimaim-poana.
Ny zavamaniry vs Zombies Heroes dia azo sintonina ankehitriny
Plants vs Zombies Heroes, lohateny vaovao an'ity franchise nahomby ity, azo alaina ao amin'ny Play Store ankehitriny.
YouTurbo, ny lalao youtubers Espaniola
YouTurbo dia lalao iray izay mpandray anjara fototra no youtubers Espaniola malaza indrindra, toa an'i Rubius, Giorgio, DaniRep na Lele.
Wind Runner Adventure dia mpihazakazaka tsy misy fiafarana misy loko sy hafainganam-pandeha mahamenatra
Raha mitady hatsaran-tarehy amin'ny sary ianao, hafainganam-pandeha mampihetsi-po sy haingam-pandeha hazakazaka tsy manam-paharoa, Wind Runer Adventure dia ho anao.
Hatsarao ny lalao aorian'ny lalao ao amin'ny Flappy Golf 2
Flappy Golf 2 no fitohizan'ny tohin'ny tantara lehibe nampiavaka ny Internet sy ny marobe. Noodlecake dia nanao izany indray.
Raha mitady fipoahana, fitaovam-piadiana mahery vaika ary ekipa mpiady futurista iray manontolo ianao dia lalao natao ho anao ny Agent Aliens.
Mr.Catt dia lalao video iray izay mametraka anao alohan'ny piozila sarotra sy saka iray amin'ny maha-mpihetsiketsika anao, izay tokony hampiana amin'ny epic space-ny.
Paper Wings dia lalao milamina izay mampiasa origami hanolorana fisehoana hatsarana mendrika homarihina miampy lalao filalaovana mahaliana.
Hitsambikina avy eo amin'ny sehatra iray mankany amin'ny sehatra vaovao miaraka amin'ny lalao Ketchapp vaovao antsoina hoe Hop
Raha mitady fialamboly vaovao manintona anao ianao ary afaka manaikitra amin'ny namanao na fianakavianao, Hop ho anao manomboka izao, noho izany dia mila fotoana fohy ny fampidinana azy.
Sony dia miomana ny hirotsaka amin'ny lalao video finday misy lohateny 5
Sony dia miomana ny hanambara alohan'ny taona hoe inona ny lohateny finday dimy, havoaka amin'ny volana martsa 2017.
Farany FIFA Mobile dia azo alaina ho an'ny rehetra izao
Ary farany, aorian'ny fiandrasana am-bolana dia manana FIFA Mobile ho an'ny rehetra izahay hiady ho mpilalao mahay indrindra eto an-tany.
Ady mifototra amin'ireo mpilalao hafa ao amin'ny Mafia III: Rivals
Raha mitady karama ianao handresena amin'ny ady mifandimby miaraka amin'ny sary tena tsara, Mafia III: Rivals dia mety ho anao manomboka anio ao amin'ny Play Store.
Ny skateboard hanome ny jumps mahavariana indrindra amin'ny Halfpipe Hero
Amin'ny fomba arcade madio indrindra, Halfpipe Hero dia manatanteraka ny fahatsinjovana tsotra ny fandraisana anjara aminao ireo fahatsapana ampitain'ny skateboard.
Ampio Little Red Hook amin'ny diany miaraka amin'i Moonwhale ao amin'ny Legend of Skyfish lehibe
Raha mitady traikefa nahafinaritra ianao, majika ary lalao izay manana ny zava-drehetra amin'ny sehatra teknika, ny The Legend of Skyfish dia iray amin'ireo vola aloa amin'ny Android.
Pixels Advance dia arcade indie haingam-pandeha a la Pac-Man
Pixels Advance dia manolotra anao lalao indie misy pixelated miverina amin'ny fomban'ny Pac-Man ary amin'izany dia mila miatrika sefo farany dimy ianao.
Ampidiro ny fitaovam-piadianao ary aringano ireo vahiny ireo amin'ny fomba Pang indrindra amin'ny The Bug Butcher
Lalao video arcade tena tsara amin'ny fomban'ny Pang indrindra miandry anao miaraka amin'ny The Bug Butcher, vaovao avy amin'ny studio lehibe Noodlecake Studios
Halfbrick dia manolotra an'i Dan the Man, sehatra mahavariana ahafahanao mandaka ny fomba taloha
Dan the Man no zava-baovao avy amin'ny Halfbrick Studio, mpamorona ny Fruit Ninja, ary tamin'ity indray mitoraka ity dia napetrany teo anoloan'ny arcade beat ianao izay misy kalitao tsara
Vaovao farany Fallout Shelter misy iraka vaovao sy hetsika manokana
Fallout Shelter dia havaozina amin'ny 1.8 mba hitondra iraka vaovao sy hetsika manokana izay hanolotra atiny manokana amin'ny daty toa ny Halloween.
Carmageddon for Android dia maimaim-poana misintona izao
Ankehitriny ny kinova Android an'ny lalao angano Carmageddon dia azo sintonina maimaim-poana (miaraka amin'ny dokam-barotra sy micropayments hafa) avy amin'ny Play Store.
Pokémon GO dia hanampy valisoa hahafinaritra kokoa sy mahafa-po kokoa ny fanabeazana
Amin'io bonus fihazana io dia azonao atao ny misambotra Pokémon karazana iray toy ny afo rehefa mahazo medaly Kindler ianao.
Manampy ny lalao HTML 5 ny Telegram
Telegram dia mandefa fanavaozana vaovao izay mamela anao hilalao lalao HTML 5 amin'ny alàlan'ny bot nefa tsy mila mivoaka ny fampiharana
Harry Potter sy ny Magicien World dia tonga amin'ny Android
Ny lalao Lego mifototra amin'ny tontolo Harry Potter dia efa ao amin'ny Android, manararaotra ny fisokafan'ny boky farany nataon'ny mpamosavy malaza.
Tonga indray ny anjara andraikitra lehibe indrindra amin'ny Banner Saga 2
Raha mitady toerana tsara sy lalao video mendrika ny iray amin'ny euro ilaina ianao dia mifanaraka tanteraka amin'ny fanantenana rehetra ny Banner Saga 2.
Manaova ny fitsangantsanganana mahatalanjona indrindra amin'ny bisikiletanao ao Pumped: BMX 3, ilay vaovao avy any Noodlecake
Raha mitady arcade ianao mba hanana fotoana mahafinaritra ao ambadiky ny bisikiletanao, Pumped: BMX 3 no lalao lavorary ho azy satria manana fizika mahafinaritra.
Concrete Jungle na izay mety ho tanàna Sim be lavitra mifantoka amin'ny piozila
Raha mpankafy ny Sim City ianao dia tsy maintsy mividy Concrete Jungle mba hankafy lalao video tsy manam-paharoa izay mamerina ny fanahin'io angano io.
Milalaova amin'ny hery misintona amin'ny planeta ao amin'ny Orbit lehibe
Orbit dia lalao video iray izay mahafantatra ny fomba filalaovana tsara ny karany rehefa miresaka gravitasi sy planeta manodidina ny lavaka mainty.
Looty Dungeon dia mitondra anao alohan'ny fikitihana lehibe ao amin'ny pixel sy tranomaizina tsy manam-petra
Looty Dungeon dia noforonin'ny Yodo1 Games, mpamorona ny Crossy Road, hahafahanao mahatakatra ny fitoviana amin'ny fahitana.
GoodBye Pokemon Go, Salama Root
GoodBye Pokemon Go, Salama Root, noho izany dia manao veloma ny Pokemon Go aho. Nahafinaritra ny nihaona taminao fa toy ny fitiavana fahavaratra tsara dia tonga ny fotoana hanaovana veloma.
Efa ao amin'ny Play Store NBA 2k17 io. Lazainay aminao ny vidiny sy ny antsipiriany bebe kokoa momba ity lalao basikety mahafinaritra ity.
Machines Micro izao dia lalao Android
Tonga amin'ny endrika lalao multiplayer ireo milina bitika angano, miaraka amin'ny làlambe 18 amin'ny 3D, fiara 77 ary sary manaitra ny Play Store
Misy antsipiriany misimisy momba an'i Torchlight Mobile, aseho amin'ny Tokyo Game Show
Noho ny horonantsary iray dia afaka mianatra momba ny ho Torchlight Mobile isika rehefa atomboka amin'ny Android. Mpikaroka trano-maizina marina a la Diablo.
Vertigo Racing sy ny hazakazak'izy ireo miaraka amin'ny fiara nalaina tao amin'ny iray amin'ireo sarimihetsika James Dean
Raha mitady lalao fiara volo taloha mpihazakazaka ianao hitaterana anao hiverina any amin'ny 50, ny Vertigo Racing dia iray izay tsy maintsy apetrakao izao.
Miroboka amin'ny fiainana majika sy mivelona amin'ny Don't Starve: Pocket Edition, amin'ny Android izao
Aza Starve: Pocket Edition dia azo alaina amin'ny Android amin'ny beta ampahibemaso mba hitondra anao any amin'ny iray amin'ireo velona tsara indrindra tato ho ato.
Tonga mpijirika tsara indrindra eto ambonin'ny planeta amin'ny hackers amin'ny lalao multiplayer
Ny hackers dia lalao video multiplayer izay manolotra anao ho mpijirika tsara indrindra eto an-tany. Lalao tsy mitovy amin'ny lalao fananganana mahazatra.
Tafavoaka velona amin'ny hadalana tsy manam-petra an'ny Crazy Circle, vaovao amin'ny Lalao Ketchapp
Crazy Circle dia lalao video vaovao avy any Ketchapp misy atiny bebe kokoa noho ireo izay matetika manomboka ary ao anatin'io sokajy tsy mahazatra io
Retro Shooting, fitifirana manana kalitao tsara sy tsotra be amin'ny lafiny rehetra
Retro Shooting dia fitifirana izay hampahatsiahy anao ireo taona 80 sy 90 an-tsokosoko izay anananao maimaim-poana ao amin'ny Google Play.
Ny stick stick dia tonga amin'ny Lemmings, lalao video izay tokony hitarihanao ireo stickmens
Sticklings dia lalao video iray izay manovo ny loharanon'ny aingam-panahy izay Lemmings ka tokony hitarika ny stickmen hatramin'ny faran'ny ambaratonga ianao.
Fampisehoana vaovao tonga amin'ny Pokemon Go Plus
Ny fanavaozana ny Pokémon Go ho an'ny Android manaraka dia misy fiasa vaovao maromaro izay hahatonga ny lalao ho tsara kokoa sy hampiala voly kokoa.
[UnRoot] Ahoana ny famongorana ny Android hilalao Pokemon Go. Mitombina ihany koa ho an'ireo mpampiasa Cyanogenmod
Androany dia asehoko anao ny fomba mety rehetra hamongorana ny Android hahafahanao milalao Pokemon Go na mampiasa fampiharana finday be karama, na dia any Cyanogenmod aza.
Azonao atao izao ny moana ny emotikonan'ny mpilalao ao amin'ny lalao Clash Royale ary hiditra amin'ny fomba amam-panao fifaninanana, dabilio sy tratra.
Lalao beta mahavariana 5 avy amin'ny Google Play Store izay tsy tokony halainao
Ao amin'ny Google Play Store dia misy fantsona beta ahafahanao mahita lalao video avo lenta azo lalaovina tsara.
FootLOL na inona no lalao baolina kitra farany manjavozavo indrindra azo jerena
FootLOL dia lalao video mahafinaritra tokoa izay tsy maintsy handresenao amin'ny lalao baolina kitra miaraka amin'ireo fandrika maharikoriko azonao atoraka eo amin'ny tavanao
Nosoratan'i Tutatis! Miadia amin'ireo Romana voaozona ireo mba hanjakany izao ao Asterix sy Friends
Panoramix, Idéfix, Obélix, Asterix ary maro hafa no miandry anao ao amin'ny Asterix sy ny namana hiady amin'ireo Romana voaozona ireo.
Animation Throwdown dia mitondra anao ny lalao karatra wildest miaraka amin'ireo endri-tsoratra Fox malaza
Fox dia mitondra an'i Family Guy, Bob's Burgers, Futurama, Dadan'ny Amerikanina ary Mpanjaka ao amin'ny havoana ho fanarian-dia an-tsokosoko
Ampidino ny hexagon tilikambo amin'ny enina manan-tsaina sy mahafinaritra!
Enina! dia lalao video izay tsy maintsy hanesoranao ireo banga mandrafitra tilikambo handatsaka hexagon izay eo an-tampony.
Dungeons & Aliens dia fiarovana amin'ny tilikambo amin'ny fomban'ny Plants vs Zombies
Raha milalao fiarovana amin'ny tilikambon'ny Popcap Games ianao dia hahita an-trano miaraka amin'ny Dungeon & Aliens, lalao maimaimpoana vaovao.
Afangaro ny arcade RPG amin'ny pinball dia azonao ny Barbaric lehibe: The Golden Hero
Barbaric: ny Golden Hero dia lalao iray izay mampifangaro ny mekanika pinball, ny RPG ary ny ady somary hafahafa mifandimby.
Pokémon GO dia mamoy ny 80% -n'ny mpampiasa karama, saingy mbola io no manome tombony be indrindra
Pokémon Go dia fahombiazana tao anatin'ny roa volana niainany, saingy very fatiantoka izy na dia tsy very fidiram-bola na tombony aza.
[APK] Ny vaovao rehetra an'ny Pokemon Go 0.37. TANDREMO RAHA FOTOTRA IANAO !!
Ny vaovao rehetra an'ny Pokemon Go 0.37, ilay kinova vaovao izay manakana ny fidirana amin'ireo mpampiasa Root na dia omena anao aza ny vahaolana hilalao amin'ny Root
Crossy Road dia namoaka fanavaozana ny "Prehistoric" ho an'ny Android sy iOS
Crossy Road dia novaina tamin'ny alàlan'ny fanavaozana lehibe izay mitondra atiny marobe mifandraika amin'ny vanim-potoana talohan'ny tantara.
Motorsport Manager, iray amin'ireo simulator F1 tsara indrindra, amidy amidy 0,10 €
Ho an'ny 0,10 € dia azonao atao ny mividy ny iray amin'ireo maodely simulator tsara indrindra amin'ny fotoana amin'ny Android: Motorsport Manager Handheld.
Ahoana ny fomba filalaovana Pokemon Go avy amin'ny Android miaraka amin'ny Root
Anio dia asehonay anao ny fomba hahafahanao milalao Pokemon Go avy amin'ny Android miaraka amin'ny Root ary tsy mila very ny tombony azo amin'ny maha mpampiasa Root anao.
Ketchapp Tennis, ankoatry ny fanolorana fomba tokana sy multiplayer, ahafahanao mampiasa ny findainao ho toy ny raketa tenisy.
Manaova fanampiny tsy ankiato amin'ity ankamantatra maimaim-poana fantatra amin'ny anarana hoe Numbo Jumbo ity
Numbo Jumbo dia lalao video iray manokana izay mila ampidirinao tsy an-kijanona hahazoana ny isa avo indrindra azo atao. Miverina ny matematika.
Mianjera toy ny vatobe midina amin'ny tilikambo ao amin'ny tranomaizina Stretch
Stretch Dungeon dia lalao Nitrome vaovao izay manana kalitao marobe, toa ny mekanika lalao pinball.
Angony ny akora rehetra amin'ity lalao mahafinaritra antsoina hoe Dotorio ity
Dotorio dia lalao iray izay tsy maintsy hanangonanao ny akora volamena rehetra amin'ny alàlan'ny haavon'ny fahasarotana 122.
CELL 13, piozila vaovao miorina amin'ny fizika zavatra
CELL 13 dia lalao ankamantatra izay tsy maintsy ialanao amin'ireo sela 13 miandry anao miaraka amin'ireo karazana piozila mihoatra ny 65.
Tongava fanjakan'ny cartel amin'ny lalao ofisialin'ny fahitalavitra ao Narcos: Cartel Wars
Narcos: Cartel Wars dia lalao manangana trano izay tsy maintsy lasa lehiben'ny cartel drugo.
Azonao atao ny manangona hatramin'ny 60% amin'ireo lalao rehetra ireo ao amin'ny Google Play Store
Raha mitady hividy lalao miaraka amin'ny fihenan'ny vidiny hatramin'ny 60% ianao dia tsy azo averina intsony ity lisitry ny lalao video avy amin'ny Google Play Store ity.
Ny marika fiampitana biby sy afo dia nihemotra hatramin'ny martsa 2017
Nintendo dia nanemotra ny famoahana ny Animal Crossing sy Fire Emblem hatramin'ny martsa 2017. Lalao video roa izay tokony ho tonga tamin'ireny volana ireny.
Ny Pokémon GO Plus azo ampiasaina dia ho hita amin'ny 16 septambra
Ny 16 septambra no daty famoahana ny fitaovana azo ampiasaina Pokémon Go Plus izay nahemotra tamin'ny fahatongavany tamin'ny volana Jolay tany am-piandohana
Ahoana ny fomba filalaovana kaonty Pokemon Go 2 amin'ny fotoana iray ihany amin'ny terminal Android iray ihany. Mety ho an'ny fampiharana toa ny WhatsApp, Telegram… ..
Androany dia asehoko anao ny fomba filalaovana kaonty Pokemon Go 2 amin'ny ora iray ihany amin'ny terminal Android iray ihany, manan-kery ho an'ny fampiharana toa ny WhatsApp, Telegram, sns, sns.
Nintendo dia hitondra an'i Mario amin'ny fitaovana finday amin'ny alàlan'ny Super Mario Run, voalohany amin'ny iOS
Super Mario Run no ho mpilalao malaza voalohany amin'ny orinasa Japoney tonga amin'ny finday; amin'ny iOS irery izao
Ho an'ny fanavaozana ny Clash Royale manaraka, azo atsahatra ny mpifanandrina mba tsy handefasan'izy ireo fanehoan-kevitra amin'ny ady.
Azonao atao izao ny milaza amin'i Google Maps rehefa milalao Pokémon Go ianao
Google Maps izao dia mamela ny fametahana marika amin'ny "The kronologie", ilay toerana anoratana ny fihetsiketsehana rehetra, miaraka amin'ny "Catching Pokémons".
Ny andian-tsarimihetsika manga sy anime Naruto tsara mankany amin'ny Android misy Ultimate Ninja Blazing
Ny andian-tsarimihetsika manga sy manga Naruto dia tonga eo amin'ny efijery findainao amin'ny alàlan'ny Ultimate Ninja Blazing misy mandritra ny andro maro
He-Man ary amin'ny herin'ny Grayskull! miandry anao ao amin'ny He-Man Tappers of Grayskull
Miverina any Eternia hiady amin'i Skeletor amin'ny tsindry antsoina hoe He-Man Tappers of Grayskull, lalao avo lenta.
Ampianaro ny Roofie amin'ny tampon-trano mahagaga sy manintona indrindra ao Roofbot
Roofbot dia mitondra antsika any amin'ny Roofie izay mila manampy amin'ny famahana ireo ankamantatra hita eny an-tampon'ny ambaratonga am-polony maro isika.
Mivarotra tahiry ary manankarena amin'ny Rainmaker lehibe: Stock Trading
Rainmaker: Stock Trade dia lalao miavaka iray izay hahafantaranao tsara ny dikan'ny hoe mpivarotra izay mividy sy mivarotra tahiry.
Ny lalao mahazatra dia misy vitsivitsy ao amin'ny Play Store ary Ketchapp Games dia iray amin'ireo manam-pahaizana amin'ity karazana lalao ity. Ankehitriny dia manana iray hafa izy: Stony Road
Riptide GP: Renegade na inona no mahavariana sary amin'ny lalao video
Riptide GP: Renegade dia mitondra ny hyperjets amin'ny alàlan'ny rano mandeha amin'ny multiplayer an-tserasera marobe.
Lalao tsy mahazatra sy mahafinaritra miaraka amin'ny HiveFall izay mila manampy ny renitantely manangona ny mamimbony avy amin'ny voninkazo ary manome azy ho an'ny tohotra.
I, Falling Robot dia lalao ahafahanao manampy ilay robot mahafatifaty hianjera avy eny amin'ny lanitra amin'ny alàlan'ny sensor gyroscope.
Flip Diving dia mitondra antsika amin'ny iray amin'ireo antsitrika tsara indrindra amin'ny fitsambikinana olympika an'ireo atleta samihafa miandry anao hahita azy ireo.
Lost Maze dia platformer an'ny piozila avo lenta izay tokony hanampianao an'i Misty hiverina any an-tranony amin'ny alàlan'ny karazana mekanika rehetra.
Ny mpamosavy kely no mahery mpiaro ity lalao Nitrome retro monochrome vaovao antsoina hoe Magic Mansion ity, izay manana toetra tsara.
Fikafika Pokemon Go hihaza Pokemon rehetra
Androany izahay manome anao ny tsara indrindra Pokemon Go Trick mba hihaza Pokemon, ao anatin'izany ireo Pokemons Legendary tadiavina izay sarotra be tokoa.
Lalao Nitrome 10 maimaim-poana
Nitrome dia studio izay mirehareha amin'ny safidy hendry amin'ny lalao video avy amin'ny sokajy mety rehetra toa ny sehatra, RPG na mpihazakazaka tsy misy farany
Pokémon GO dia mikasika ny valindrihana ary manomboka izao dia mitete hatrany ny mpampiasa sy ny fisintomana
Pokémon GO dia nahatratra 45 tapitrisa mpampiasa mavitrika isan'andro hijoro 30 tapitrisa ankehitriny, izay mampiseho fihenam-bidy kely.
Inona no azontsika antenaina amin'ny Minecraft Pocket Edition amin'ny kinova 0.16
Ny Version 0.16 an'ny Minecraft Pocket Edition dia ho tonga feno fampiasa vaovao toy ny menus vaovao, fonosana loharano ary maro hafa.
Ny lalao video 15 tsara indrindra avy amin'ny Ketchapp Games
Ny Ketchapp Games dia iray amin'ireo studio mamokatra be indrindra. Ireto ny lalao video 15 tsara indrindra avy amin'ny repertoire tsara izay ananany ao amin'ny Google Play.
Bot vaovao Pokemon Go 2 vaovao izay tsy azonao sy tsy tokony hotadiavinao
Androany izahay mitondra ireto bota Pokemon Go vaovao 2 ireto, ny tena be indrindra ary miasa tanteraka ary koa ny tutorial feno amin'ny fampiasana azy ireo.
Pokémon GO dia havaozina mba hahafahan'ny Pokémon anao mahazo naoty avy amin'ny mpitarika ekipa
Ny kinova Pokémon GO vaovao dia mitondra ny fanombanana ny Pokémon ataon'ny mpitarika ny ekipa (mena, mavo na manga)
Ny pataloha Steppy dia hampihomehy anao ary hianatra ny hanao dingana tsirairay mba tsy hianjera ilay mahery fo ary hihomehy azy ny rehetra.
Wave, fahagagana kely iray hafa avy amin'ny Ketchapp Games miaraka amin'ny lalao mahafinaritra
Wave no zava-baovao avy amin'ny Ketchapp Games izay mametraka ny tanjona amin'ny tsy fiankinan-doha amin'ny lalao izay mirehareha amin'ny filalaovana mitantana manantona aloha.
Lalao platform vaovao 12 ho an'ny Android mila andramo
Betsaka ny lalao sehatra ho an'ny Android, ary amin'ity taona ity isika dia manana vaovao tsara toa ireto roa ambin'ny folo ireto avy amin'ity lisitr'izy ireo ity.
Perchang dia mitondra ny fizika zavatra amin'ny ambaratonga manaraka amin'ny piozila tena tsara
Perchang dia lalao piozila ka ny fizika zavatra dia mitondra antsika amin'ny karazana mekanika ary mamela antsika hiatrika karazana lalao hafa.
Zahao i Mars amin'ity lalao video sarotra sy liana antsoina hoe Mars: Mars ity
Mars: Mars dia lalao video avo lenta izay ahafahan'ny fahasahiranana mitantana ny sambo hitondra anao eny an-dalambe mangidy.
Ady miorina amin'ny turn in Deux Ex GO, ny vaovao avy amin'ny Square Enix izay manana kalitao faran'izay tsara
Square Enix dia manolotra antsika lalao video misy kalitao lehibe amin'ny lafiny rehetra mba hitondrantsika antsika ny votoatin'ny Deux Ex amin'ny Android.
Dead Shell, RPG roguelike tany am-boalohany sy tsy manam-paharoa izay hamandrika anao ao anaty tranomaizina
Dead Shell dia lalao toy ny roguelike vaovao izay mahasarika ny Retro ary ilay lalao manokana izay hametraka anao alohan'ny karazana RPG hafa.
Ataovy ny dunks indrindra sy adala indrindra ao amin'ny Dunkers Basketball Madness
Dunkers dia lalao video amin'ny baskety izay ahafahanao milalao eo an-toerana miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminao hampiseho ireo olona mampatahotra indrindra amin'izao fotoana izao.
Mikendry tsara ny tsipìkanao mba hanafoanana ireo goblin miaraka amina loha-loha amin'ilay Tiny Archers
Tiny Archers dia lalao fiarovana fiarovana lehibe izay ny tsipìka no namanao akaiky indrindra ary ny zana-tsipìka namanao akaiky indrindra.
Snakebird dia piozila ahafahanao manampy ilay vorona kely hahazoana izany voankazo sarobidy izany
Snakebird dia lalao video misy loko miloko sy piozila tena be pitsiny izay misongadina amin'ny singa teknika rehetra toy ny sary.
[APK] Ny bot Pokemon Go voalohany izay voafehy avy amin'ny finday Android
Androany dia manolotra ny bot Pokemon Go voalohany ho an'ny Android aho, bot iray hifehezana azy dia mila manana terminal Android fotsiny ianao fa tsy misy zavatra hafa.
Fampiharana échec 6 ho an'ny mpitia dalao
Manana rindrambaiko chess vitsivitsy amin'ny Android izahay ary sarotra ny mahita ny sasany mifanaraka amin'ny zavatra ilainay. Mety ho vitanao izany.
[APK] Sintomy ny rindranasa Pokemon Go voajirika hilalao tsy miala ao an-trano tsy misy Root. Marina ho an'ny KitKat, Lollipop ary Marshmallow
Te misintona ny rindranasa Pokemon Go voajirika ve ianao mba hahafahanao milalao nefa tsy miala ao an-trano raha tsy mila Root sy avy amin'ny kinova Android KitKat?
Lalao video 5 toy ny Minecraft ho an'ireo mpitia velona sy velona
Terraria dia iray amin'ireo ohatra tsara indrindra amin'ny lalao karazana Minecraft ary ao amin'ity lisitry ny dimy ity no ho hitanao eo amin'ny làlanay.
Manana Bot vaovao ho an'ny Pokemon Go izahay miaraka amina interface interface
Izahay dia efa manana bot vaovao ho an'ny Pokemon Go miaraka amina mpampiasa mpampiasa sary ary ao amin'ny Androidsis dia mampianatra anao ny fomba fampidinana sy fikirakirana azy tsara.